Umkhiqizi Nomhlinzeki Wokwakhiwa Kwezindlu waseChina | I-Mestech
Idizayini yezindlu ezakhiwe ngogesi ukwakheka kokubukeka nokwakheka kwangaphakathi kwemikhiqizo kagesi. Kufaka ukwakheka okuphelele nemininingwane yokwakheka kwezingxenye.
Izinto ezivalekile zepulasitiki nezinsimbi ziyingxenye ebalulekile yemikhiqizo kagesi. Bahlinzeka ngendawo yokuhlala, ukusekelwa, ukuvikelwa nokulungiswa komkhiqizo wonke, futhi baxhume futhi bahlanganise zonke izingxenye ziphelele.
Imikhiqizo ye-elekthronikhi yimikhiqizo ehlobene esuselwa kumandla kagesi, ikakhulukazi afaka amawashi, amafoni ahlakaniphile, izingcingo, amasethi we-TV, i-VCD, i-SVCD, i-DVD, i-VCD, i-VCD, i-VCD, i-VCD, i-VCD, i-camcorder, umsakazo, irekhoda, isipikha senhlanganisela, iCD, ikhompyutha , isidlali segeyimu, imikhiqizo yokuxhumana yeselula, njll
I-router yebhokisi le-TV
Imishini yezobuchwepheshe yezokwelapha
Imoto esibukweni esingemuva
Ukwakhiwa kwezakhiwo nokwakhiwa kwemikhiqizo ye-elekthronikhi kusekelwe ekubukekeni nasekusebenzeni kwezidingo zemikhiqizo. Ukwakhiwa komkhiqizo we-elekthronikhi ngokuvamile kudlula kulezi zigaba ezilandelayo:
-Imakethe yemininingwane yokufuna ulwazi;
ukuhlaziywa kobuchwepheshe kwezobuchwepheshe (ukuhlaziywa okungenzeka); ukukhulelwa komkhiqizo nesikimu sokuqala -Dweba umdwebo wokubonakala komkhiqizo;
isikrini futhi unqume uhlelo lokubukeka -Ukukhiqizwa kwemodeli ye-3D; izingxenye design lokuqala; ukwakheka kwengxenye; indawo yomhlangano design -Ukwakhiwa kwemininingwane yezingxenye;
ukuqinisekiswa kokukhiqizwa kwebhodi lesandla;
-Ingabe imidwebo yokuklama ihanjiswa kumkhiqizi wesikhunta -Ukuqinisekisa idizayini:
umklamo ongenhla uzokhiqizwa ngemuva kokudlulisa ukubuyekeza. Ngemuva kokuqedwa kwesibonelo, izivivinyo ezifanele kufanele zenziwe ngokuya ngezidingo zemithethonqubo yokuphepha, kufaka phakathi: ukusebenza, ukuhlangana, isakhiwo, umsindo, ukwehla, njll.
Yakha imodeli ye-3D
Indlu yomkhiqizo kagesi ngokuvamile ifaka izinto ezilandelayo:
Amacala aphezulu nangaphansi, izingxenye zokuxhaswa zangaphakathi, okhiye, isikrini esibukwayo, umgodi webhethri, isikhombimsebenzisi, njll. Ngakho-ke, ukwakheka kwegobolondo lomkhiqizo we-elekthronikhi kufaka ukwakheka kwalezi zinto ezilandelayo:
-PCBA ukwakhiwa kwengxenye
Idizayini -Shell -Iklamo eyisihluthulelo
Idizayini yesakhiwo seMotion
Idizayini yokwakhiwa kwamanzi
-Ukwakhiwa kwamalensi okuthunyelwe kwesibani
-LCD lwemidlalo design
-Idizayini ye-angle design
Kunezindlela ezintathu zokwethula imininingwane yomkhiqizo ekwakhiweni:
A: Ngokwesidingo semakethe, unjiniyela ukhulelwa ukwakheka okuphelele (i-ODM) komkhiqizo. Ingabuye ikhethwe ngamakhasimende noma ithuthukiswe ngokuzimela.
B: Amakhasimende ahlinzeka ngemininingwane yokwakhiwa, njengamafayela we-IGS (ikakhulukazi) noma izithombe (i-OEM).
C: Ingaguqulwa ngesisekelo somumo womkhiqizo okhona; ingakhethwa ngamakhasimende noma ithuthukiswe ngokuzimela.
Onjiniyela ababandakanyeka ekwakhiweni komkhiqizo kumele babe nalolu lwazi nolwazi olulandelayo
1.Ulwazi lokubekezelelana okulinganayo nokulingana phakathi kwezingxenye
Inqubo yokukhiqiza kanye nezindleko zezingxenye zepulasitiki nezingxenye zehadiwe
3. Izidingo zomsebenzi nezidingo zokubukeka kwemikhiqizo
4. Ulwazi lokwakhiwa kwemikhiqizo efanayo
5. Ubudlelwano bobukhulu bezinto zikagesi
6. Izindinganiso zokuthembeka okufanele kuhlangatshezwane nazo
7. Sebenzisa ngobuciko isoftware yokwakha ukuklama nokuhlaziya imikhiqizo
IMestech inikeza i-OEM design yomkhiqizo we-elektroniki, ukuvulwa kwesikhunta nezinsizakalo zomhlangano womkhiqizo. Uma unalolu hlobo lwesidingo, sicela uxhumane nathi, sizokukhonza ngenhliziyo yonke.
Langaphambilini Metal wokushaya
Olandelayo: Idizayini yokusebenza kwekhaya
Umshini womjovo wePlastiki